လေနုအေး: April 2011
ခုလိုပိတ်ရက်ဆို ဟိုးမနက်နေထွက်ချိန်ကနေ ညဘက်လသာတဲ့အချိန်အထိ တနေ့ လုံး မကြိုက်တာဆိုတာ မရှိလောက်အောင် အကုန်ကြိုက်နေတတ်ပါတယ်။ အင်းးးးးးး အဓိကက အလုပ်မလုပ် ရတာကြောင့်ပဲလားတော့ မသိ။
အိပ်ချင်တိုင်းအိပ်ပစ်လိုက်လို့ ရတဲ့ အဲဒီပိတ်ရက်မနက်တွေကို အရမ်းကြိုက်။ နေ့ တိုင်းအသံစာစာနဲ့အော်နှိုးတတ်တဲ့ နှိုးစက်လေး ပါးစိတ်တွေပိတ် ငြိမ်ချက်သားကောင်းတာကို လှောင်ပြုံးလေးပြုံးပြီး ပြူတင်းပေါက်ကတဆင့် အပြာရောင်ကောင်းကင်ကြီးရယ် တိမ်တွေရယ်ကို နှုတ်ဆက်လို့ ပေါ့။
သားနဲ့ သူ့ အဖေမနိုးခင်… ပြီးတော့ အိမ်နားလေးက ဈေးလေးဈေးခေါင်းမကွဲခင်(တခါတလေ ခေါင်းကွဲမှ ရောက်သွားတတ်ပါတယ်) ဈေးလေးပြေးရတဲ့ အရသာလေးလဲ ကြိုက်။ ပိတောက်ပင်ကြီးကို မော့ကြည့်မိတော့ ဟိုးထိပ်ဖျားမှာ အပွင့်ဝါ၀ါတွေခဲလို့ ။ ပိတောက်ရှိနေတဲ့ တိုင်းပြည်မှာ နေခွင့်ရနေတာကလဲ အကြိုက်တွေထဲက တခုပေါ့။
ဒီဈေးလေးမှာ ရေချိုငါးတွေရှိတတ်တယ်။ တခါတခါ ပုဇွန်စိတ်လေးတွေ ရတတ်တယ်။ ပြီးတော့ မြန်မာပြည်က ကန်စွန်းရိုးပွ၊ ချဉ်ပေါင်၊ မြန်မာရုံးပတီ အပြင် ဆူးပုတ်ရွက်၊ ဒညင်းသီးကအစ စုံတော့ ဒီဈေးလေးနား နေရတာကိုလဲ အတော်ကြိုက်။
ဈေးကပြန်လာတော့ ဘုရားဆွမ်းတော်ကပ်၊ ပြီးတော့ အိပ်ယာထဲ ပြုံးပြုံးကြီးနိုးနေတဲ့သားကို မျက်နှာသစ်၊သွားတိုက်၊ အကျီင်္လဲပေးရတာကိုလဲ ကြိုက်နေမိပြန်တယ်။ ရုံးဖွင့်ရက်ဆို သားမနိုးခင် ရုံးအမြန်ပြေးရတာမိုလား။ အကြိုက်ဆုံးကတော့ မနက်တိုင်း ဘုရားမှန်မှန်ရှိခိုးတတ်တဲ့ သားလေးရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဘုရားရှိခိုးသံလေးပါပဲ။
အိပ်ပုတ်ကြီးတဲ့ သားဖေဖေမနိုးခင် သားနဲ့ အတူ ဆော့ကစားရတဲ့ မနက်ခင်းတွေကလဲ အတော်ကြည်နူးဖို့ ကောင်းပါတယ်။
ပိတ်ရက်တွေဆို မြန်မာအစားအစာလေး တမျိုးမျိုးလုပ်စားရတာလဲ ပျော်စရာတမျိုးပေါ့။ နေ့ လည်စာစားချိန်မှ နိုးလာတတ်တဲ့ သားဖေဖေကို ကိုယ်လုပ်ထားတဲ့ မြန်မာစာတခုခုကျွေးရင်း မိသားစုပိတ်ရက် အလည်ထွက်ဖို့တိုင်ပင်ရတာကိုက လွတ်လွတ်လပ်လပ် ကြိုက်နှစ်သက်စရာ။
သားကို ရုပ်ရှင်လိုက်ပြရတာကို သားဖေဖေရော ကိုယ်ပါနှစ်သက်မိကြတယ်။ များသောအားဖြင့် ကာတွန်းကားကြိုက်တဲ့ သားဖေဖေက သားကို မေ့လျော့ ပြီး ရုပ်ရှင်ထဲ မျောဝင်နေတတ်တာမို့သားနဲ့ တူတူ စကားပြောလိုက် ကြည့်လိုက် သားနားမလည်တာကို နားလည်အောင်ရှင်းပြလိုက်နဲ့ ကာတွန်းကားမကြိုက်တဲ့ ကိုယ်က သားနဲ့ ကျမှ ကာတွန်းကားတွေ ကြိုက်တတ်လာပြန်ရော။
ညနေအိမ်ပြန်ရောက်တော့ သားဖေဖေဂီတာတီးတာကို သားမေမေကိုယ်က သီချင်းဆို သားကနားထောင်… ကီးဝင်ကီးထွက် အလွန်ညံ့တဲ့ သူ့ မေမေ အသံကြောင်ကြောင်ကို လက်ခုတ်တီး… အဲဒီပျော်စရာကောင်းတဲ့ မိသားစုအချိန်လေးက တနေ့ လုံးမှာ အကြိုက်ဆုံးပေါ့။
သားအိပ်တဲ့အချိန်မှာ ဘလော့တွေအလည်ထွက်၊ မျက်နှာစာအုပ်ပေါ်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နဲ့နောက်တနေ့ လဲ အားလပ်ရက်မို့ လွတ်လပ်ချင်တိုင်းလွတ်လပ်…. ဖတ်လက်စစာအုပ်ပြီးမှအိပ်တော့ အိပ်တဲ့အချိန်က မနက်၃နာရီတဲ့။ ကဲ… အချိန်ဇယားတွေကို သပိတ်မှောက်… ကိုယ်လုပ်ချင်တာကိုယ် ဘယ်သူမှ ဂရုမစိုက်လုပ်ခွင့်ရတဲ့ စက်ရုပ်ဆန်တဲ့ ဘ၀ထဲက ရုန်းထွက်ခွင့်ရတဲ့ အဲဒီပိတ်ရက်တွေကို ကိုယ်အထူး အရူးအမူးကြိုက်မိတာ ဆန်းသလားနော်။
ချစ်တဲ့သက်ဝေရေ… ပျင်းရတာသိပ်ကြိုက်နေတဲ့ တန်ခူးကို လှုပ်နိုးပြီး တက်ဂ်ဂိမ်းရေးခိုင်းတဲ့ သက်ဝေလို ချစ်တတ်လွန်းတဲ့ သူငယ်ချင်းတယောက်ရှိနေတာကလဲ တန်ခူးရဲ့ အကြိုက်တကာထဲက အကြိုက်ဆုံးတခုပဲပေါ့။
Posted by တန်ခူး at 1:33 AM 10 comments:
စာမရေးတာအတော်ကြာနေတဲ့ ဘလော့ဂါငပျင်းကျွန်မကို ချစ်သူငယ်ချင်းသက်ဝေက အချစ်အကြောင်းပြောခိုင်းရင်း သံယောဇဉ်ရပ်ဝန်းဆီ တခေါက်ပြန်လာဖို့ခေါ်ခဲ့တယ်…။ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ ခေါင်းစဉ်ဆိုတော့ ချစ်သောသူတွေပြောတဲ့ အချစ်အကြောင်းလိုက်နားထောင်ရင်း စာရေးချင်တဲ့စိတ်တွေ ပြန်ဝင်လာရင်း သက်ဝေကိုကျေးဇူးတင်မိတော့တယ်…။
တကယ်တမ်းရေးမလို့အချစ်အကြောင်းပြန်တွေး… အချစ်စာမျက်နှာတွေပြန်လှန်… ပြန်ချစ်ကြည့်တော့… သိပ်မအောင်မြင်…။ သြော်… ငါနဲ့ မနှစ်ကမှ ချစ်တတ်သေး… ဒီနှစ်သိပ်မချစ်တတ်တော့အောင် အသက်တွေ အတော်ကြီးလာပါလားလို့ တရားကျမိတယ်။ ဒီတော့… ချစ်တတ်တုန်းက (ဘယ်လောက်များချစ်တတ်သလဲဆို သူများဇာတ်လမ်းတွေ ပူးဝင်ခံစား စာထဲမှာချစ်… ကဗျာထဲမှာချစ်) ရေးထားခဲ့တဲ့ ၁၉၉၄ခုနှစ်က လုံမလေးမဂ္ဂဇင်းမှာ ဖော်ပြခံခဲ့ရတဲ့ ၀တ္ထုတိုလေး တပုဒ်ကို ပြန်လည်ဝေမျှလိုက်ပါတယ်…။
ဒီဝတ္ထုတိုထဲက အကြောင်းအရာတွေက ကျွန်မရဲ့အဖေအရင်းတယောက်လိုချစ်ရတဲ့ ဆရာကြီး နဲ့အမြဲငြိမ်းချမ်းပြီးချစ်စရာကောင်းတဲ့ကျွန်မဆရာမတို့ ရဲ့ သူများတွေပြောကြတဲ့ ပါးစပ်ရာဇ၀င်ကို ပူးဝင်ခံစားပြီးရေးခဲ့တာပါ။ အချစ်ဆိုတာ ပေးဆပ်ခြင်းလို့ ခံယူထားသူတယောက်… အချစ်ကြောင့်ကိုယ့်ချစ်သူ အပူတွေမခံစားစေချင်သူတယောက်မှ ချစ်မိတဲ့ မိန်းခလေးတယောက်ပြောပြတဲ့ အချစ်အကြောင်းပေါ့။ အဲဒီအရွယ်က ချစ်ကြသူတိုင်းပေါင်းစေချင်တဲ့ ကျွန်မရဲ့ကလေးဆန်တဲ့အတ္တလေးနဲ့ ရေးခဲ့တာပါ။ တကယ်တော့… ကျွန်မချစ်တဲ့ဆရာကြီးက သူ့ ချစ်သူတင်မက တလောကလုံးကို ပေးဆပ်ခြင်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းအေးမြတဲ့မေတ္တာတရားတွေ ဖောဖောသီသီပေးသွားခဲ့တာပါ။ ဒီစာလေးကို ပြန်တင်ရင်း ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ ကျွန်မဆရာကြီးကို လွမ်းဆွတ်မျက်ရည်ဝဲမိပါတယ်။
ဆုံးဖြတ်ချက်တို့ပီပြင်ခိုင်မာလာချိန်မှာ ကျွန်မနှလုံးသာဟာ မြင်မကောင်းလောက်အောင် ကွဲအက်ကြေမွနေခဲ့ပြီ။ အနည်းငယ် ယိုယွင်းနေခဲ့တဲ့ မာနတရားတို့ ကို ပြန်လည်ပြုပြင်ရင်း အကိုကြီးရှေ့ မှာ အချိုသာဆုံးပြုံးနိုင်ဖို့အကြိမ်ကြိမ် လေ့ကျင့်နေမိသေးတယ်။ နောက်ဆုံးအဖြစ် အကိုကြီးကို ကျွန်မအနိုင်ယူပါရစေ။ နောင်တတရားတွေရဲ့ဖိနှိပ်မှုအောက်က မျက်နှာတခုကို ကျေနပ်စွာ ကြည့်ပါရစေ။ ရွေးချယ်ခွင့်နည်းပါးတဲ့ မိန်းမတယောက်ရဲ့ အရှုံးကိုတော့ အကိုကြီးမမြင်စေရ။ အရှက်သိက္ခာ၊ မာနတရား၊ နှလုံးသားစတဲ့ ကြီးမားတဲ့ အရင်းအနှီးတွေနဲ့လှလှပပ ရှုံးနိမ့်ခဲ့သူက ကျွန်မပါအကိုကြီး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မတဦးတည်းသာနေတဲ့ အခန်းကျဉ်းလေးထဲက စိုရွှဲနေတဲ့ ခေါင်းအုံးတလုံးကို အကိုကြီး ဘယ်တွေ့ နိုင်မလဲ။ အိပ်မပျော်တဲ့ညများစွာမှာ ကျွန်မရင်ဖွင့်ချက်တွေကို မညည်းမညူ နားထောင်ပေးတတ်တဲ့ ဒိုင်ယာရီလေးကလဲ သိပ်သိစ္စာရှိပါတယ်။ ဒီတော့ ကျွန်မရဲ့အရှုံးကို အကိုကြီးဘယ်တော့မှ မြင်ရမှာ မဟုတ်ဘူးလေ။
ဟန်ဆောင်မှုတွေကို လွှမ်းခြုံပြီး ခပ်ထေ့ထေ့အပြုံးနဲ့အကိုကြီးကို နှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်။ မွှေးကြိုင်ဖွေးဆွတ်တဲ့ ဖိတ်စာတစောင်ကို ပကတိငြိမ်သက်စွာ အကိုကြီးလက်ထဲကို ပေးချင်ပါတယ်။တဆိတ် အကိုကြီးရယ်… အဲဒီအချိန်ကျမှ အဓိပါယ် မရှိစွာ အသံတုန်တုန်တွေနဲ့ကျွန်မအတောင့်တ အမျှော်လင့်ဆုံး စကားတခွန်းကိုတော့ မပြောနဲ့ တော့နော်။ အဲဒီအခါ ကျွန်မ မျက်ရည်တွေနဲ့အော်ရယ်မိမှာ သေချာပါတယ်လေ။ အရာရာကို ထိန်းချူပ်နိုင်စွမ်းကြီးတဲ့ အကိုကြီးနှုတ်ကလဲ မထူးတော့တဲ့ အခြေအနေတခုမှာ ဒီစကားကို ပြောဖို့အစွမ်းကုန် ထိန်းချူပ်နေဦးမယ်ဆိုတာ။ အတူရှိခဲ့စဉ် အချိန်လေးတွေက ကြည်နူးမှုလေးတွေကို တသသ တမ်းတရင်း ဆုံးရှုံးမှုတခုကို ရင်မှာပိုက်လို့အခံရခက်တဲ့ ဝေဒနာဆိုးတခုကို အကိုကြီးခံစားနေရင်ပဲ ကျွန်မကျေနပ်ပါပြီ။
ဖိတ်စာပေါ်က သတို့ သားနာမည်ကို ဖတ်ပြီးတိုင်း လူတွေက တအံ့တသြ ဖြစ်နေကြပါတယ်။ ဒါဟာ မျက်လှည့်ပြကွက်တခုလားတဲ့။ အကိုကြီးနဲ့ ကျွန်မ ဘာဆိုင်လို့ လဲလို့နာကျင်စွာ အဖြေ ပြန်ပေးမိသေးတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်နော်။ အရာရှိတယောက်နဲ့သာမာန်ရုံးစာရေးမတယောက်တို့ ရဲ့ခင်မင်မှု။ သိပ်ကို သူစိမ်းဆန်လွန်းတဲ့ ပတ်သက်မှု။ ဒါပဲလေ။ ဒီ့အပြင် ဘာများ ထူးခြားဦးမှာလဲ။
အကိုကြီးရဲ့ ဂရုစိုက်မှု၊ နွေးထွေးလှိုက်လှဲမှု၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကို ပေါပေါသီသီရနေတဲ့ ကျွန်မကို သူတို့ အမြင်မှာ တချိန်မှာ အကိုကြီးရဲ့ ဇနီးလောင်းအဖြစ် ပုံသေမှတ်ယူထားကြတာ တကယ်တော့လည်း မဆန်းပါဘူးလေ။ ကျွန်မကိုယ်တိုင်တောင် ဒီဘ၀ကို မျှော်လင့်ရင်ခုန်ခဲ့ဖူးသူပဲ။ အကိုကြီးနဲ့ ကျွန်မ ထမင်းလက်ဆုံ အတူတူစားတာ၊ ရုံးဆင်းချိန်မှာ အတူပြန်တတ်ကြတာ၊ အလှူမင်္ဂလာဆောင်မှာ ယှဉ်တွဲသွားတတ်တာ၊ အကိုကြီး အိမ်နဲ့ကျွန်မအိမ် နှစ်အိမ်တအိမ်လို ခင်မင်ရင်းနှီးလာကြတာတွေက စပြီး ကျွန်မမျှော်လင့်ချက်တွေ အခြေခိုင် လာခဲ့တာ။ အကိုကြီးအတွက် အ၀တ်အစားကအစ ရွေးခြယ် ၀ယ်ပေးခွင့်တွေရလာတဲ့အခါမှာတော့ ကျွန်မအိပ်မက်တွေဟာ ချိုမြလာခဲ့တယ်။ တခါတခါ အရေးကြီးကိစ္စကြောင့် အကိုကြီးရုံးမတတ်နိုင်ရင် နေမထိထိုင်မထိနဲ့အပေါင်းအသင်းတွေကြားမှာ ရယ်မောဖို့ တောင် မေ့ လျော့မိခဲ့တယ်။ ကြင်နာနူးညံ့စွာ ငေးစိုက်ကြည့်တတ်တဲ့ အကိုကြီးမျက်ဝန်းအကြည့်တွေဟာ ကျွန်မရင်ခုန်သံတွေ ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ တခါတလေ အကိုကြီးကို ကလေးဆန်ဆန် စိတ်ကောက်ပြရင်း မချော့တတ်၊ ချော့တတ်နဲ့အကိုကြီး ပျာပျာသလဲချော့ရင် ပီတတွေဖြာပြီး ကျေနပ်နေမိတယ်။ ကျွန်မဘ၀ရဲ့ လိုအပ်ချက်ဟာ အကိုကြီးပဲလို့လေးလေးနက်နက် ယုံကြည်လာမိတဲ့အခါ အကိုကြီးဘ၀မှာလဲ ကျွန်မရှိမှ ပြည့်စုံနိုင်အောင် အရာရာကို အလိုက်တသိနဲ့ဂရုစိုက်မိခဲ့တယ်။
ရှေ့ ဆက်မယ့်ခရီးအတွက် အတွေးတွေဟာ ပန်းချီကားတချပ်လို လှပနေခဲ့တယ်။ အကိုကြီးနဲ့ ကျွန်မ အလွန်လှပတဲ့ ပျဉ်ထောင်အိမ် သေးသေးလေးထဲမှာ အတူနေကြမယ်။ ခြံဝန်းလေးထဲမှာ စံပယ်နံ့ လေးတွေနဲ့သင်းထုံနေအောင် စံပယ်ရုံလေးတွေကို စိတ်ရှည်လက်ရှည် စိုက်ထားမယ်။ အိမ်ပြတင်းလေးတွေမှာတော့ အကိုကြီးကြိုက်တဲ့ အဖြူရောက် ခန်းဆီးစလေးတွေ တပ်ထားမယ်။ အကိုကြီးနှစ်သက်တဲ့အုန်းနို့ ခေါက်ဆွဲကို ခဏခဏ ချက်ကျွေးမယ်။ အကိုကြီးအတွက် အနာဂတ် မျှော်လင့်ချက်လေးတွေဖြစ်တဲ့ သားလေးဖြစ်ဖြစ်၊ သမီးလေးဖြစ်ဖြစ် မွေးပေးချင်သေးတယ်လေ။ သားလေးကိုတော့ ငယ်ငယ်လေးထဲက ပညာထူးချွန်အောင် ထိန်းသိမ်းပေးရမယ်။ သမီးလေး ဆိုရင်တော့ ကျွန်မလို အိမ်ထောင်မှု အထိန်းအသိမ်း နိုင်နင်းအောင် ငယ်ငယ်လေးကတည်းက ပြုပြင်ပေးရမယ်။ သိပ်လှပမက်မောစရာ မိသားစုဘ၀လေးကို အကိုကြီးလဲ တောင့်တနေမှာပါ။
အကိုကြီးနဲ့ကျွန်မကြားထဲက မမြင်ရတဲ့ သံယောဇဉ်ကြိုးတွေ အထပ်ထပ် ချည်နှောင်မိလာတဲ့အခါ အကိုကြီးဆီက ရင်ဖွင့်စကားတခွန်းကို ကျွန်မတရှိုက်မက်မက် တောင့်တလာမိတယ်။ ဘယ်အချိန်မှာများ ဖွင့်ပြောလေမလဲဆိုတဲ့ မျှောင်လင့်ချက်တခုနဲ့ရူးသွပ်ရင်ခုန်နေမိခဲ့တယ်။ အကိုကြီးရဲ့ ရင်ဖွင့်စကားဟာ ကလေးဆန်ဆန် သိပ်ချစ်တယ်လို့ များ ပြောလေမလား။ ဒါမှမဟုတ် ဆွေ့ ကို ကိုယ်မြတ်နိုးနေပြီကွာလို့နူးညံ့တဲ့ အသံတွေနဲ့ဖွင့်အံနေမှာလား။ ကိုယ်တို့ လက်ထပ်ကြရအောင်ကွာလို့ရှင်းရှင်းကြီးပြောရင်တော့ ကျွန်မ နည်းနည်းပြုံးမိမှာ။ အကိုကြီးရှက်သွားမှာစိုးလို့ကျွန်မချက်ချင်း ခေါင်းညိတ်အဖြေပေးမိချင် ပေးမိမှာ။ အဲဒီအခါ အကိုကြီးမျက်နှာဟာ သိပ်ကိုဝင်းပပျော်ရွှင်သွားမှာပဲနော်။
ကိုယ်တို့ က ဖွင့်ပြောဖို့မလိုတဲ့ နှလုံးသားချင်း နားလည်နေကြတဲ့ချစ်သူတွေလေလို့အကိုကြီးသူငယ်ချင်းကို ခပ်တိုးတိုးပြောပြနေတာကို ကျွန်မကြားရတော့ ရင်မှာ သိမ့်ခနဲ နေအောင် ခံစားရတယ်။ ဒါပေမယ့်…. နားလည်မှု…အဲဒီနားလည်မှုဆိုတာကြီးကို ကြာလာတော့ ကျွန်မခါးသက်လာတယ်။ အကိုကြီးနဲ့ကျွန်မရဲ့ တရားမ၀င်ချစ်သူဘ၀လေးကို ခုံခုံမင်မင် တွယ်တာ နေရာကနေ အချိန်တွေကြာညောင်းလာတဲ့အခါ တိုးတက်မှုမရှိတဲ့ အခြေအနေကို မချင့်မရဲဖြစ်လာတယ်။ ဘယ်အရာကများ အဟန့် အတားဖြစ်နေလို့အကိုကြီးဖွင့်မပြောတာလဲလို့အကြိမ်ကြိမ် စဉ်းစားနေမိတယ်။ မပြတ်သားတာလား။ တွေဝေတာလား။ အကိုကြီးကို နားမလည်နိုင်စွာနဲ့ ပဲ မျှော်လင့်ချက်တွေက တစတစ ပါးလျားလာတယ်။
အကိုကြီး ဖွင့်ပြောရမှာများ ရှက်နေလို့ လားဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ ကျွန်မကစလို့လမ်းဖွင့်စကားဆိုခဲ့ပေါင်းလဲများပြီ။ အကိုကြီးကတော့ ဘာမှမရိပ်မိသလို မှင်သေသေနဲ့ဆက်နေနိုင်သေးတယ်။ စဉ်းစားကြည့် အကိုကြီး… အကိုကြီးဆီက ရင်ဖွင့်စကား တစုံတရာကို လက်ခံမရရှိပဲ ကျွန်မတို့ဘယ်လိုများ ချစ်သူဘ၀ကို အတိအလင်း ရောက်နိုင်မလဲ။ အဲဒီဘ၀လေးကို အကိုကြီး တကယ်ပဲ မမက်မောတာလားဆိုတဲ့ သံသယတွေတောင် ဖြစ်ထွန်းလာခဲ့တယ်။ ကျွန်မနဲ့ အဆင့်တူ ရုံးဝန်ထမ်းတယောက်နဲ့တွဲပြလည်း အကိုကြီးက မပေါက်ကွဲတဲ့အပြင် လူကြီးဆန်ဆန် ဟန်မပျက် နေခဲ့သေးတယ်။ ဘာတွေကို ဘယ်လို နားလည်ရမလဲ။
အပေါင်းအသင်းတွေက ဘယ်တော့လက်ထပ်ကြမလဲလို့ မေးရင် ရှက်ရွံ့ စွာနဲ့အပြုံးလျော့လျော့ တခုသာ တုံ့ ပြန်နိုင်တဲ့ကျွန်မအဖြစ်ကို အကိုကြီး နည်းနည်းလေးတောင် မရိပ်မိတော့ဘူးလား။ အကိုကြီးကို ဒီလိုမေးခွန်းမျိုးများ မေးရင် ဘယ်လိုများဖြေမလဲ။ အကိုကြီးရဲ့ဆက်ဆံမှုတွေဟာ အမှန်တကယ်ပဲ ရိုးသားနေလို့ လားလို့ဆန်းစစ်ကြည့်ပေါင်းလဲများပြီ။ ဖွင့်မပြောတာကလွဲရင် အရာရာ လိုက်လျော ဆက်ဆံနေတဲ့ အကိုကြီးဆီမှာ ကျွန်မနဲ့ ပတ်သက်ရင် ရိုးသားသန့် စင်တဲ့ ခံစားမှုထက် ပိုတယ်ဆိုတာတော့ ကျွန်မလောင်းရဲတယ်။
ကျွန်မအသက်သုံးဆယ့်ငါးနှစ်ဟာ အိမ်ထောင်ပြုသင့်တဲ့အရွယ် ရောက်ပြီလို့အမေက သတိပေးသလိုလို ပြောတဲ့အခါ ကျွန်မအနည်းငယ်တော့ တုန်လှုပ်မိခဲ့တယ်။ မောင်ကျော်တင့်နဲ့ ဆို ဘာမှ သဘောမတူစရာ အကြောင်း မရှိပါဘူးလို့အမေကပြောတော့ ကျွန်မ အနေရသိပ်ကျပ်သွားမိတယ်။ ကြည့်စမ်း… အမေတို့ တောင် ကျွန်မနဲ့အကိုကြီးကို ချစ်သူတွေလို့အလွယ်တကူ သတ်မှတ်ထားကြတာ။ ကျွန်မ အိမ်ထောင်ဖက်ဟာ အကိုကြီးမဖြစ်နိုင်မှန်း သေချာသထက် သေချာလာချိန်မှာ ကျွန်မအသက်ရှုင်နေမှုဟာ အဓိပါယ် မရှိတော့သလိုပဲ။ အချိန်တော်တော်ကြာ ငုပ်လျိုးနေခဲ့တဲ့ မာနတွေက ပြန်လည်နေရာယူလာပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်တခုကို ပီပီပြင်ပြင် ချလိုက်တယ်။ အရင်းအနှီးက ကျွန်မနှလုံးသား၊ အကိုကြီးနှလုံးသားတစိတ်တဒေသတော့ ပါနိုင်တာပေါ့လေ။
ကျွန်မစေ့စပ်တော့မယ်လို့အကိုကြီးကို ကြိုအသိပေးခဲ့ခြင်းဟာ ကျွန်မအတွက် နောက်ဆုံးကောက်ရိုးတမျှင် အဖြစ်ပါပဲ။ ကြွင်းကျန်နေသေးတဲ့ မျှော်လင့်ချက် အသေးစားလေးတွေရဲ့ လှုံ့ ဆော်မှုကြောင့် ယိုင်နဲ့ နဲ့ ခြေလှမ်းတွေနဲ့အကိုကြီးဆီ ကျွန်မအရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ နာရီဝက်လောက် စကားမပြောပဲ ခေါင်းငုံ့ ငြိမ်သက်နေခဲ့ပြီးမှ မင်္ဂလာဆောင်အတွက် လိုတဲ့အကူအညီရှိရင် ပြောလေဆိုတဲ့အကိုကြီးရဲ့လေသံပျော့ပျော့ကို ကြားလိုက်ရတယ်။ ဒီတင်ပဲ ကျွန်မရင်ခုန်သံတွေရပ်ပြီး မျှော်လင့်ချက်တွေ သေဆုံးသွားခဲ့တယ်။ ကျွန်မခုံမင်စွာ ငေးစိုက်ကြည့်ဖူးတဲ့ အကိုကြီးရဲ့မျက်နှာကိုတော့ ရင်ထဲက ဆက်ခါဆက်ခါ ရိုက်နေမိတယ်။
မျှော်လင့်ချက်တွေကို ဘာလို့ ယူဆောင်လာခဲ့လဲ အကိုကြီး။ ကြင်နာမှု၊ ဂရုစိုက်မှုတွေနဲ့ဘာလို့အရူးလုပ်ခဲ့သလဲ။ တွေဝေလွန်းတဲ့ သတ္တိနည်းတဲ့ ယောင်္ကျားတယောက်လို့တကမ္ဘာလုံးကြားအောင် အော်ဟစ်နေလဲ အကိုကြီးကတော့ ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်သလို အေးစက်ပြနေဦးမယ်မိုလား။
နင့်စေ့စပ်ပွဲအပြီး တပတ်လောက်အထိ ရုံးမတက်ဘူး။ ရုံးပြန်တက်တော့လဲ ပိန်ချုံးနေတာပဲဟာ လို့ သိပ်မရင်းနှီးတဲ့ သူငယ်ချင်းမက ကျွန်မကိုပဲ ရက်စက်လွန်းတဲ့ မိန်းမတယောက်လို ပြောပြနေတော့ ခြောက်ကပ်စွာ ရယ်မောမိခဲ့တယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်က ကျွန်မကို လူကြမ်းကြီးတယောက်လို ကြည့်ကြတယ်… သစ္စာမဲ့တဲ့မိန်းမလို့စွတ်စွဲကြတယ်။ လှည့်စားရက်တဲ့မိန်းမလို့လက်ညှိုးထိုးကြတယ်… ငွေသိပ်မက်တာပဲလို့တီးတိုးအတင်းချကြတယ်။ ကျွန်မကတော့ ခံနိုင်ရည်ရှိတယ်… ပြတ်သားတယ်… ဒီလုပ်ရပ်မှာ ကျွန်မဟာ အပြစ်ရှိသူ မဟုတ်ဘူးလို့ ယုံကြည်တယ်။ ဘယ်လိုလဲ အကိုကြီး… ငြင်းဦးမှာလား။
မင်္ဂလာကိစ္စအတွက် အပူတပြင်း တက်တက်ကြွကြွ စီစဉ်နေတဲ့ သတို့ သားလောင်းမျက်နှာကို ကျွန်မသေသေချာချာတောင် မကြည့်မိဘူး။ မကြာခင်ကျရောက်လာမယ့် လက်ထပ်မင်္ဂလာနေ့ အတွက်လည်း နည်းနည်းလေးမှ ရင်မခုန်ဘူး…။ ရှေ့ ဆက်ရမယ့် ဘ၀ခရီး… ရတယ်လေ… ကြုံသလိုပဲ။ ကျွန်မမျှော်လင့်ရမယ့်အလုပ်ကို စက်ဆုပ်သွားပြီ။ ကျွန်မမင်္ဂလာပွဲကို အကိုကြီးလာဖြစ်အောင်လာမယ်ဆိုတာ သိနေတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ကျွန်မ သေသေချာချာ မကြည့်ဖူးတဲ့ သတို့ သားမျက်နှာကို တမြတ်တနိုး ငေးစိုက်ကြည့်ပြီး အကိုကြီးကို လေးလေးစားစား မိတ်ဆက်ပေးလိုက်မယ်။ အကိုကြီးမျက်နှာ တချက်ပျက်သွားခဲ့ရင် ကျွန်မမင်္ဂလာပွဲက သိပ်အဓိပါယ်ရှိသွားမှာ။ အကိုကြီးမျက်ရည်များဝဲနေခဲ့ဦးမယ် ဆိုရင် ကျွန်မအမှန်တကယ်နိုင်ပြီပေါ့။
10:49PM April32011
Posted by တန်ခူး at 11:07 PM 10 comments: